Fadeexad Kufsi oo Halis ugu Jira In Lagala Noqdo Abaalmarinta Oscar xiddiga Kobe Bryant %
Fadeexad Kufsi oo Halis ugu Jira In Lagala Noqdo Abaalmarinta Oscar xiddiga Kobe Bryant
FalanqeyntaLatin AmericaWararka Maanta
Halyeyga kubadda kolayga Maraykanka ee NBA, ee Kobe Bryant ayaa halis ugu jira in laga qaado biladda qaaliga ah ee Oscar ee filimada oo dhowaan la guddoonsiiyey kaddib markii lasoo faqay fadeexado kufsi oo uu galay 15 sannadood ka hor.
Olole ballaadhan oo ka dhan ah Kobe Bryant ayaa ka bilaabmay waddanka Maraykanka, waxaana jira waraaqo codsi ah oo ay kunnaan qof saxeexeen oo lagu dalbanayo in lagala noqdo biladda Oscar oo la guddoonsiiyey dhowaan markii uu metelay filim gaaban oo saamayn badan ku yeeshay dunida, kaas oo shirkadda Hollywood ay soo xulatay.
Bryant ayaa lagu eedeeyey in sannadkii 2003 uu kufsaday gabadh 19 jir ah oo ka shaqaynaysay hotel lagu magacaabo Edwards oo ku yaalla Colorado.
Filimka uu metelay oo lagu magacaabo Dear Basketball ayaa waxa lagu soo ururiyey 20-kii sannadood ee uu ku jiray ciyaaraha kubadda kolayga oo uu dunida ka dhigay wacdaro, isla markaana uu koobab badan u qaaday naadiga Los Angeles Lakers, taas oo uu ciyaaraha kaga fadhiistay sannadkii 2016 isagoon koox kale dharkeeda xidhanin.
Warqadda codsiga waxa illaa hadda saxeexay dad tiradoodu kor u dhaafayso 17,000 qof, waxaanay dadkaasi ku doodayaan in ay dunida ceeb ku tahay in qof caan ku ah kufsiga oo dunida oo dhan laga ogyahay la siiyo abaalmarin qaali ah.
Sannadkii 2014 ayey maxkamad ku taalla Maraykanku laashay dacwad muddo dheer socotay oo la xidhiidhay kufsiga, taas oo muran badan dhalisay, hase yeeshee, waxa markaas la sheegay in aan lagu helin wax caddayn ah inuu galay dembiga.
Muddo 90 sannadood ah oo la bixinayey abaalmarinta Oscar, waxa uu Bryant noqon doonaa qofkii koowaad ee lagala noqdo taariikhda, haddii go’aan lagu gaadho in lagala noqno.
XOG: Waqtiga Uu Dhacayo Kulanka 2aad Ee Madrid Derby Oo Sababi Kara In Real Ay Ka Harto CL [Sidee]